ဟိုတယ်အခန်းတွင်ထားသော ရေနွေးအိုးများကို လုံးဝအသုံးမပြုသင့်သည့် အကြောင်းအရင်း – WunYan
ဟိုတယ်အခန်းတွင်ထားသော ရေနွေးအိုးများကို လုံးဝအသုံးမပြုသင့်သည့် အကြောင်းအရင်း
Posted on August 29, 2017 by whuk-46651
ခရီးတစ်ခု ထွက်ပြီဆိုရင် မတည်းမဖြစ် ဟိုတယ်တွေမှာ တည်းခိုရလေ့ရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်အများစုက ဧည့်သည်ရဲ့ အခန်းထဲမှာ ကော်ဖီသောက်ဖို့၊ ရေနွေးသောက်ဖို့၊ ခေါက်ဆွဲပြုတ်ဖို့ စသည့်ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ အရံသင့်ထားပေးတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီရေနွေးအိုးတွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်တတ်တဲ့ ဧည်သည်အချို့ကြောင့် ဟိုတယ်အခန်းထဲက ရေနွေးအိုးဟာ အသက် အန္တရာယ်ဖြစ်လောက်တဲ့ထိ စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
လတ်တလော လူမှုကွန်ရက် တွစ်တာမှာ Guy ‘Yug’ Blomberg ဆိုတဲ့ အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း မေးခွန့်ကြောင့် အင်တာနက် တစ်ခုလုံးပျံ့နှံ့သွားပြီး ပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင် ဟိုတယ်အခန်းတွင်းက ရေနွေးအိုးနဲ့ ပက်သက်ပြီး သတိပေးရတဲ့ထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Guy ‘Yug’ Blomberg ရဲ့ မေးခွန်းကတော့ ခရီးထွက်တဲ့အချိန်မှာ အတွင်းခံဘောင်းဘီကို ရေနွေးအိုးထဲထည့်ပြုတ်တတ်တဲ့ ငါ့အသိထဲက ဘယ်သူရှိလဲ..? လို့ တင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီစတေးတပ်စ်ရဲ့ ကွန်မန့်ကို ကြည့်ပြီး မထင်မှတ်ရလောက်အောင် အဲဒီလို ပြုမူသူတွေ အများကြီးရှိနေတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အချို့ကွန်မန့်တွေထဲမှာ တစ်ညအိပ်လောက် လေယာဉ်ပေါ်အမှုထမ်းရသူတွေက သူတို့ရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေကို ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်ပြုတ်ကြောင်း ရေးသားထားပြီး အဲလိုပြုမူတဲ့ လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက် မိသွားတာကြောင့် အလုပ်ပြုတ်ခဲ့ကြောင်း ရေးသားထားပါတယ်။
ပညာရှင်တွေကတော့ အတွင်းခံတွေကို ဟိုတယ်အခန်းထဲက အများသုံးနေတဲ့ ရေနွေးအိုးထဲ ထည့်မပြုတ်ကြဖို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီလို ထည့်ပြုတ်ခြင်းအားဖြင့် အညစ်အကြေးကြောင့် ထွက်လာတဲ့ အဆိပ်အတောက်တွေဟာ ရေနွေးအိုးမှာ ကပ်ငြိကျန်ခဲ့ပြီး နောက်တစ်ကြိမ် သောက်သုံးရန် ကြိုချက်တဲ့သူတွေကို အသက်အန္တရာယ် ရှိစေနိုင်တယ်လို့ တားမြစ်ထားပါတယ်။
လူအတော်များများကတော့ ဟိုတယ်မှာထားတဲ့ ရေနွေးအိုကို ဒီလိုလုပ်စရာလားလို့ ဒေါသထွက်နေကြသလို၊ အချို့ကလည်း ဟိုတယ်က ရေနွေးအိုးကို ဘယ်တော့မှ မသုံးတော့ဘူးလို့ ဝင်မန့်သွားကြတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
မိတ်ဆွေရော နောက်တစ်ခါ ဟိုတယ်တည်းဖြစ်တဲ့အခါ ရေနွေးအိုးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဘယ်လိုသဘောရပါသလဲ..? သဘောထားနဲ့ အကြံဉာဏ်ရှိရင်လဲ အားလုံးသိအောင် မန့်ခဲ့ပါဦး..။
Source : Popolay
ဟိုတယျအခနျးတှငျထားသော ရနှေေးအိုးမြားကို လုံးဝအသုံးမပွုသငျ့သညျ့ အကွောငျးအရငျး
ခရီးတဈခု ထှကျပွီဆိုရငျ မတညျးမဖွဈ ဟိုတယျတှမှော တညျးခိုရလရှေိ့ပါတယျ။ ဟိုတယျအမြားစုက ဧညျ့သညျရဲ့ အခနျးထဲမှာ ကျောဖီသောကျဖို့၊ ရနှေေးသောကျဖို့၊ ခေါကျဆှဲပွုတျဖို့ စသညျ့ရညျရှယျခကျြမြားနဲ့ အရံသငျ့ထားပေးတတျကွပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ဒီရနှေေးအိုးတှကေို အလှဲသုံးစားလုပျတတျတဲ့ ဧညျသညျအခြို့ကွောငျ့ ဟိုတယျအခနျးထဲက ရနှေေးအိုးဟာ အသကျ အန်တရာယျဖွဈလောကျတဲ့ထိ စိုးရိမျစရာဖွဈခဲ့ပါတယျ။
လတျတလော လူမှုကှနျရကျ တှဈတာမှာ Guy ‘Yug’ Blomberg ဆိုတဲ့ အကောငျ့ပိုငျရှငျရဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး မေးခှနျ့ကွောငျ့ အငျတာနကျ တဈခုလုံးပြံ့နှံ့သှားပွီး ပညာရှငျတှကေိုယျတိုငျ ဟိုတယျအခနျးတှငျးက ရနှေေးအိုးနဲ့ ပကျသကျပွီး သတိပေးရတဲ့ထိ ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
Guy ‘Yug’ Blomberg ရဲ့ မေးခှနျးကတော့ ခရီးထှကျတဲ့အခြိနျမှာ အတှငျးခံဘောငျးဘီကို ရနှေေးအိုးထဲထညျ့ပွုတျတတျတဲ့ ငါ့အသိထဲက ဘယျသူရှိလဲ..? လို့ တငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
အဲဒီစတေးတပျဈရဲ့ ကှနျမနျ့ကို ကွညျ့ပွီး မထငျမှတျရလောကျအောငျ အဲဒီလို ပွုမူသူတှေ အမြားကွီးရှိနတောကို တှခေဲ့ရပါတယျ။ အခြို့ကှနျမနျ့တှထေဲမှာ တဈညအိပျလောကျ လယောဉျပျေါအမှုထမျးရသူတှကေ သူတို့ရဲ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီတှကေို ရနှေေးအိုးထဲ ထညျ့ပွုတျကွောငျး ရေးသားထားပွီး အဲလိုပွုမူတဲ့ လယောဉျမယျတဈယောကျ မိသှားတာကွောငျ့ အလုပျပွုတျခဲ့ကွောငျး ရေးသားထားပါတယျ။
ပညာရှငျတှကေတော့ အတှငျးခံတှကေို ဟိုတယျအခနျးထဲက အမြားသုံးနတေဲ့ ရနှေေးအိုးထဲ ထညျ့မပွုတျကွဖို့ သတိပေးလိုကျပါတယျ။ အဲဒီလို ထညျ့ပွုတျခွငျးအားဖွငျ့ အညဈအကွေးကွောငျ့ ထှကျလာတဲ့ အဆိပျအတောကျတှဟော ရနှေေးအိုးမှာ ကပျငွိကနျြခဲ့ပွီး နောကျတဈကွိမျ သောကျသုံးရနျ ကွိုခကျြတဲ့သူတှကေို အသကျအန်တရာယျ ရှိစနေိုငျတယျလို့ တားမွဈထားပါတယျ။
လူအတျောမြားမြားကတော့ ဟိုတယျမှာထားတဲ့ ရနှေေးအိုကို ဒီလိုလုပျစရာလားလို့ ဒေါသထှကျနကွေသလို၊ အခြို့ကလညျး ဟိုတယျက ရနှေေးအိုးကို ဘယျတော့မှ မသုံးတော့ဘူးလို့ ဝငျမနျ့သှားကွတာတှလေညျး ရှိပါတယျ။
မိတျဆှရေော နောကျတဈခါ ဟိုတယျတညျးဖွဈတဲ့အခါ ရနှေေးအိုးနဲ့ ပကျသကျပွီး ဘယျလိုသဘောရပါသလဲ..? သဘောထားနဲ့ အကွံဉာဏျရှိရငျလဲ အားလုံးသိအောငျ မနျ့ခဲ့ပါဦး..။
©2019 WunYan | Design: Newspaperly WordPress Theme